‘Takapona neburi retsono’ | Kwayedza
22 Mar, 2019 - 00:03	 2019-03-21T18:10:29+00:00 2019-03-22T00:04:01+00:00 0 Views
‘Vanhu vakafa, kunyanya chembere nevakaremara’
Ray Bande ari kuCHIMANIMANI
MURUME wekuMachongwe, kwaRusitu, kuChimanimani, akatura mafemo mushure mekufamba chinhambwe chemakiromita 40 kusvika kuSkyline nemhuri yake apo vakapona neburi retsono zvichitevera njodzi yakavawira yemvura yemafashamu yaive nedutu guru.
Vave kuzivikanwa vakafa nekuda kwemafashamu aya vanosvika 98 ndokuparadza zvipfuyo, migwagwa, mazambuko nemhuka – kunyanya kuChimanimani nenzvimbo dzakapoteredza. Vamwe vanhu vakawanda havasati vawanikwa.
Nekuda kwenjodzi iyi, mutungamiri wenyika President Mnangagwa vange vari kuManicaland kubva nemusi weChipiri svondo rino uko vaiona nekutungamirira mabasa ekubatsira nekununura vose vakasangana nenjodzi iyi.
VaLuckmore Rusero – avo vaiva nemudzimai wavo nemwana – vanotenda Mwari kuti vapenyu nekuti mvura yemafashamu iyi yakaparadza dzimba nezvipfuyo zvavo zvose.
Vanoti vakatiza mafashamu aya pakati pehusiku vachitsvaga nzvimbo dzakakwirira dzisingasvike mvura.
“Takapona nenyasha dzaMwari. Handizivi kuti nezvese zvatakasangana nazvo takagona kurarama sei. Takangoona mvura yave kupinda mumba yakawanda, ini ndokumutsa mudzimai ndokutakura mwana kuti tibude mumba tione zvaiitika.
“Tichingobuda, ndipo patakaona kuti kwakanga kusina kumira mushe. Ipapo, ipapo takafamba takananga kwaive kwakakwirira sezvo takanga tisina nguva yekutora twakawanda kubva mumba. Takangokwanisa kutakura katundu keupfu nechikafu chishoma kwave kutokwidza makata,” vanodaro VaRusero apo vaikurukura neKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.
VaRusero vanoti vakafamba chinhambwe chinodarika 40 km kuti vakwanise kusvika pedyo nenzvimbo yeSkyline.
BHANGA rePeople’s Own Savings Bank rakapa magumbeze anokosha $20 000 nemagirosari anokosha $15 000 kuti zvinobatsira vanhu vakawirwa nenjodzi yemafashamu eCyclone Idai. Dionne Mpofu, uyo akafanobata chigaro chaPOSB PR Manager anogashidza rubatsiro urwu kugurukota rezvematunhu nezvekuvaka Cde July Moyo kwaMutare nezuro.
Vanoti pakutanga, chinangwa chavo chaive chekuenda kunzvimbo yeSilverstream, kwekare kuChimanimani, uko kwavanoshanda vachigara asi mhuri yavo iri kwaMachongwe.
“Apa ndaisaziva kuti kune vanhu vari kuwana rubatisro kuSkyline, ndakauya nemhuri tichifamba takananga kuSilverstream.
VaRusero vanoenderera mberi vachiti, “Kwatabva uku kwakaoma. Vanhu vakafa, kunyanya chembere nevakaremara. Yakanga ingori batai batai, chiri chipata-pata kutsvaga kuti vanhu vatize mvura iyo yanga ine simba nemhepo yakanyanya.”
Rubatsiro kuvanhu venharaunda yeChimanimani rwakatanga kunyatsosvika munzvimbo dzakaparadzwa nemafashamu nemusi weMuvhuro wadarika.
Zvikopokopo zvemauto nezvimwe zvanamuzvinhabhizimisi zviri kubatsira nekuendesa mishonga yekurapa kuchipatara cheNgangu.
Vamwe vanhu vakanyanya kukuvara munjodzi iyi vari kutakurwa kuendeswa kuzvipatara zvinosanganisira Mutambara Mission Hospitala neMutare Provincial Hospital.
Brigadier General Joe Muzvidziwa – avo vari kutungamirira chirongwa chemauto ari kubatsira vanhu vakawirwa nenjodzi iyi – vanoti vane tarisiro yekusvika munzvimbo dzose dzakawirwa nemafashanu panozosvika China chino.
“Semaonero amuri kuita, ndege dziri kupinda kusvika munzvimbo yeNgangu imo muChimanimani. Tine tarisiro yekuti zuva rikaramba ririko, tinokwanisa kupinda munzvimbo dzese panosvika musi weChina,” vanodaro.
Mutungamiriri anoona nezvekubatsirwa kwevanhu munguva yenjodzi kuboka reCivil Protection Unit kuManicaland, VaEdgaars Seenza, avo vanova zvakare provincial administrator, vanoti mimwe migwagwa iri kuvhurwa kuti vakwanise kusvika kune vose vakawirwa nenjodzi iyi.
“Nyaya yanyanya kunetsa ndeyekukwanisa kusvikira nzvimbo dzose dzakawirwa nenjodzi yeCyclone Idai.
“Asi tiri mubishi takabatana nemauto edu kuti tivhure dzimwe nzira dzinoita kuti tikwanise kusvikako. Tine tarisiro yekuti tisvike kwese mumazuva mashoma anotevera,” vanodaro.